Oromo News 04.15.21 | KWIT
Sioux City keessa Crittent Center kan jiraattan bakka taaumsa emergency diigu jiru. Dura buaan lakkoofs Covid-19 murtii kana keessati bakka guddaa kan keesa akka qabu himan. Agency jia kana jalqaba irrati jia kana jalqaba irrati bakka taa’umsa iraa qarqaarsa muranii jiru. Dura buaan bakka sanii akka oduu guyyaa har’aa irrati himanitti Covid-19 kan walqabatee hojattooni hafuufi namni haarawa seenuf kan guutu kan hir’atee akka miidhu danda’u himani Jirani. Lesloe Heying akka jedhetti virus kuni qacarrii dirijjitii irrati rakkina guddaa akka fidee fi warra haarawa seenule baaye akka xiqqaate himan. Emergency Shelter kan baname bara 1970 dhuma irrati bakka 3901 Green Ave tti ture. 2020 keessa, ijoole 180 bakka kana kan jiraattan ture. Gaazexan Sioux City akka gabaaseti dura buaan bordi Crittenton Center’s akka jedhetti boordi walitti qabuu bakka barbaachisu adda baasu fi agency fedhii kanniin haala danda’een guutudhan irra deebine akkamiti akka jalqabuu qabnuu biyyoota oolatin akka waliin hojattan himan.
Gaazexesittooni Sioux City akka gabaasanitti durabuaan Crittenton Center’s board walitti qabaan bakka barbaachisan addaan baasu fi agency fedhii kanniin haga danda’ameen guutudhaf bakka taa’amitti akkamiti irraa deebian hojachuu qaban ummata wajjiin akka waliin hojattan himan. Governor Iowa Kim Reynolds oduu gabaasa torbaan irrati akka himtetti.
Sababa Covid-19 jiraattoni Sioux City baaye kan miidhaman beekamuudhaf sooqumsa godhu Jirani.
Lucal church fi Sioux City NAACP mana Fayyaa Siouxland public wajjiin tauudhan talaali corona virus kennu jiru. Torbaan kana keesa program gara gurraacha, indigenous fi ummata bifaa waliin kan godhamu ta’a.
Data deparmantii fayyaa local irraa akka mulisutti lakkoofsi nama gurraacha fi African American Community kan fudhate parsantii 1% akka tae mullisa.
Barnoonni wanna kana maraafu qulfiidha. Nutti kan barbaannu akka ummani comfortable tauu fi akkasuma akka jiruu isaani kan qaarati akka deebian feena jedhan.
Ike Rayford president naanicha kan NAACP tti.
Yale University keessati qorannoo godhameen akka mullisutti ummani bifaa Covid-19 akka guddisuu fi baayisu beeysisan. Umanni guaracha kna United state keessati sababa covid-19 kan da’ani pranstii sadihii qixxee akka tae himan.
Kunis sababa ummata rakkini guddaa akka irra gahee fi akka rakkina kana beekani uf eegani irraayi.
Rayford akka jedhetti clinic hunda keessati talaali corona virus Johnson and Johnson vaccine biyyati guutu keesati akka hin kennamne himan. Clinic Mt. Zion Baptist Church ti guyyaa sanbataa seati ! p.m irraa kan galmeesu jalqaban yoo tau 712 253 8245 bilbiluudha fi misseji kaahus akka dandeetan himan.